Munaasibaddii Ciidda iyo hadalada Hoggaamiyayaasha Xukuumadda iyo Mucaaridka Somaliland | Somaliland.Org
September 30, 2008	Hargeysa (Somaliland.org) – Hoggaamiyayaasha Siyaasadda Somaliland ayaa dadweynaha magaalada Hargeysa saaka kala qaybgalay Tukashada Salaadda Ciiddul Fidriga oo lagu tukadey Masaajiddada waaweyn iyo garoonno kala duwan oo ku yaalla magaalada Hargeysa, halkaas oo ay madaxdu hadalo koobkooban oo duco iyo hambalyo ah uga jeediyeen dadweynaha.
Madaxweynaha xilka sii haya, mudane Daahir Riyaale Kaahin oo ayaa kumanaan dadweyne ah kula tukadey Masjid Jaamaca weyn ee magaalada Hargeysa, iyada oo ammaanka aad loo adkeeyey masaajidka iyo agagaarkiisa ka hor intii aanu mudane Riyaale soo gaadhin iyo intii uu masaajidka gudihiisa ku jireyba. Wuxuuna salaadda ka dib halkaa ka jeediyey hadal dhawr kelmedood ah oo ah inta uu mar kasta ka yidhaahdo munaasibadaha Ciidda, taas oo ah hambalyo uu u diray shacbiga Somaliland iyo ummadaha muslimiinta ah ee gutey waajibaadka Soonka bisha barakaysan ee Rammadaan, isaga oo isla markaana Illaahay uga baryey inuu dembi-dhaafsiiyo iyo in bishan bisheeda ay ku gaadhaan nabadqab iyo badhaadhe.
Mudane Riyaale ayaa waxa ka muuqdey degdeg iyo degganaansho la’aan, waxana uu halkiisa hadalkiisa oo uu ku soo koobay 47 ilbidhiqsi (47 Seconds), kadibna waxa uu ka boodey albaabka, iyada oo ay ku xeernaayeen ilaaladiisa gaarka ah oo dhextaagnaa masaajidka intii la tukanayey iyo wasiirradiisa, waxaana uu degdeg u galay gaadhigiisa oo ku go’naa albaab yar oo ku yaalla qiblada masaajidka. Dad badan oo doonayey inay arkaan hoggaamiyahooda ayay u suurageli weydey, waxaana la arkayey qaar badan oo ka mid ah oo daaqadaha masaajidka ka lalinayey indhaha si ay u halacsadaan markii uu dibadda u baxay, balse, uma suuragelin. Sidoo kale, Guddoomiyaha Xisbiga ugu weyn mucaaridka, Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa isaguna boqolaal qof kula tukadey Masaajidka Shacabka, halkaas oo uu salaadda kadib hadal kooban ka jeediyey.
Guddoomiyaha, mudane Siilaanyo, waxa uu ugu horrayn shacbiga Somaliland iyo Guud ahaan muslimiinta caalamka gudashada waajibaadka Soonka ee bisha Rammadaan iyo farxadda Ciidda. Waxana uu Illaahay uga baryey inuu xasanaad wanaagsan ka siiyo waajibka ay guteen.
Waxa kale oo uu Axmed Siilaanyo oo Illaahay ugu mahadnaqay nabadgelyada iyo xasilloonida shacbiga Somaliland uu siiyey, wuxuuna Illaahay ka baryey inuu u sii kordhiyo nabadda, isla markaana uu u hagaajiyo dowladnimada, isaga oo dhinaca kalena Shacbiga Soomaaliya ee colaaduhu daashadeen uu siiyo nabadgelyo iyo degganaansho.
Kuxigeenka Daahir Riyaale, mudane Axmed Yuusuf Yaasiin ayaa isaguna dadka kula tukadey Masaajidka weyn ee 26ka June, halkaas oo uu isaguna dhawrkii Ciidood ee ugu dambeeyey uu dadka kula tukanayey, waxana uu halkaas ka jeediyey hadal la xidhiidha fadliga bisha Rammadaan.
Garoomada Xawaadle, Kubbadda Cagta, Garoonka Dhallinta iyo goobo kale oo ka mid ah magaalada Hargeysa ayaa lagu tukadey Salaadda Ciidda. Waxaana fagaarayaashaas dadka wacdi diini ah oo la xidhiidha gudashada waajibaadyada, akhlaaqiyaadka iyo dhaqanka bulsho ee suubban qaar ka mid ah culimada waaweyn ee magaalada.
In ka badan toddoba maalmood oo mashquul ah oo waddooyinka waaweyn ee magaalada ay kala xidheen ganacsiga bacadlayaasha iyo dadka adeeganaya ee u diyaargaroobayey ciidda ayaa soo gebagebowdey, kadib markii xalay caweysin dambe uu Wasiirka Diinta iyo Awqaaftu ku dhawaaqay inay dhammaatay bisha Rammadaan, maantana la ciidey.
Ciiddan waxa lagu tilmaamay mid aad uga duwan ciidihii hore marka la eego diyaargarowga dadka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee ka socdey suuqa, iyada oo laga dareemayey suuqa dharka iyo albaabooyinka caruurtu ku ciyaaraan ganacsi xaami ah oo aan la arag dhawrkii ciidood ee u dambeeyey, inkasta oo uu jiro sicir barar saameeyey maceeshadda iyo ganacsiga kala duwan oo dhan, taas oo tilmaamaysa in waxoogaa dhaqaale ahi uu ku soo kordhay haynta shacabka.
Camirnaanta suuqyada ayaa la rumaysan yahay inay qayb weyn ka qaateen dad badan oo ka soo qaxay Soomaaliya oo deggan magaalada Hargeysa.